Kopheefi faashiniisaa Featured
Kopheen kan namoota muraasaa ta'uun hafee hundumaaf tajaajilarra ooluu kan eegale jaarraa 19fatti eddii warshaatti omishamuu jalqabeeti. Jaarraa 19fa keessa dhiironni kophee butisiiwwan cinaasaaniitii hiituu qaban yoo godhatan, dubartoonni ammoo kophee faana lafa ol jedhuufi korony'oorratti hiituu qabu keewwatu turan. Tibba kanatti kopheewwan ispoortii ykn isniikaroonni warshaatti omishamuu jalqabaniiru.
Jaarraa 20fatti kopheen faayidaasaarra faashinummaasaatiin filatamaa ture. Keessumaa filannoon kophee dargaggootaa dizaayiniisaarratti dhiibbaa cimaa uumeera. Jijjiiramaa deemuu faashinii kanaan walqabatee kopheewwan duudaafi banaan koomee dheedheeraa qaban godhachuun kan jalqabame jaarradhuma sana keessa.
Hanga ykn guddinaafi xiqqeenya kophee addaan baasuufis lakkoofsa kennuun kan eegalame jaarraadhuma eerame kanatti. Lakkoofsichi kan kennamu dheerinni, bal'iniifi olka'iinsi kophee safaramee yoo ta'u, haalli kenniinsa lakkoofsa kophee kun biyyaa biyyatti adda addummaa qaba.
Kopheewwan koomee gagaabaa, jiddugalaafi dheeraafi qabu jedhamanii beekamu. Haaluma kanaan inni gabaabaan inchii 2.5, jiddugalli inchii lamaa hanga 3.5fi dheeraan inchii afurii ol dheerata.
Dubartoota tokko tokkotti kophee koomee dheeraa qabu godhatanii deemuun ni ulfaata. Kanaafis muuxannoon barbaachisaadha. Keessumaa kopheewwan koomee qaqal'oo qaban yoo of eeggannaadhaan hingodhtamne miidhaa qaqqabsiisuu danda'u. Kanaafis qajeelfamoota ittaananii dhiyaatan hubachuun gaariidha.
Kophicha taa'atii godhadhaa. Kophicha godhattanii otoo manaa hinbahiin suuta jedhaatii ittiin tarkaanfachuu shaakala.
Lafarratti sarara sorooroo ykn sarara xuubii mana keessa hafamee hordofaa. Daaw'itii fuuldura dhaabadhaatii sararicha hordofatnii tarkaanfachaa akka jirtan hordofaa. Sochiin miila keessaniis kan soroorrateefi sirrii ta'uu hubadhaa. Ennaa tarkaanfattan qoorara keessanis soroorsaa. Miila keessan cufaa ykn walitti qabaatii qodaa lafaa kaasuu yaalaa.
Ennaa naannawa kuduraafi muduraan itti gurguramu deemtan kophee koomee dheeraa qabu hingodhatiinaa. Marga, cirracha ykn waantota lallaafoorra oggaa deemtan koomeerratti ulfaatina hindabaliinaa; koomeen kophichaa dhidhimuufi isin kuffisuu danda'aatii.
Oggaa kophee balee godhatan ulfaatina keessan gara caalu kutaa miila keessaniirra godhaa. Kunis akkuma salphaatti si'aayinaan akka tarkaanfattan isin gargaara.
Kophee koomee dheeraa qabu godhachu dura lakkoofsisaa sirrii ta'uu huabdhaa.
Kopheewwan koomee batteefi funyaan qaban deemsaaf waan mijataniif filannoo keessan taasifadhaa. Oggaa kophee bitattan faashinummaasaa qofa otoo hintaane mijaa'inasaas ilaalaa.
Guyyuu ennaa teessan miila keessan ol qabaa, kunis oggaa kophee koomee dheeraa qabu godhattan miilliifi korony'oon keessan kophicha akka muuxaneeffatu taasisa.
Sadarkaa manaa ykn gamoo ba'uufi bu'uu shaakalaa. Mi'a lafa buusaatii kaasuu shaakalaa. Miila tokkoon dhaabadhaatii televizhinii ilaaluu yaalaa ykn gocha walfakkaataa biraa raawwadhaa. Kophichi yoo miila qabee isn dhukkubse taa'atii ofirraa baasaa malee miila duwwaa hindhaabatiinaa jechuun barruu Medikaal gabaaseera.
Torban kana/This_Week 44059
Guyyaa mara/All_Days 1635854